Timo jarista casriga ah: fikradaha casriga ah ee timahaaga | Ragga Stylish
Qaar badan oo ka mid ah timo jarista casriga ahi waxay diiradda saaraan dhammaan caannimada qaybta sare ee timaha. Laakiin ereyga casriga ah halkan wuxuu noqon karaa marin habaabin, tan iyo Noocyada sida aadka ah looga codsado timajarayaasha maanta waa kuwa hore: timo gaaban oo dhinacyada ah iyo nape oo dheer dusha sare.
Beddelka (kuwaas oo ay jiraan, in kastoo ay si kale u muuqan karto) ayaa ah jaritaanno dabacsan oo, halkii aad timaha ka ilaalin lahayd isticmaalka timo jaraha, isku day inaad ka faa'iideysato tayadiisa. Haddii aad rabto wax ka badan dariiqaaga, waxaa jira fursado xiiso leh oo loogu talagalay timo toosan, ruxruxa iyo timo jilicsan..
1 Timo jarista Gradient
2 Timo jare ka jara
3 Fikrado badan oo timo jaraya oo casri ah
Timo jarista Gradient
Asal ahaan waxaa jira laba qaab oo loo xiro timahaaga gaagaaban dhinacyada iyo dhererka dusha sare: leh ama aan lahayn jaranjarooyin (sidoo kale loo yaqaan gunta hoose). In kasta oo ay leeyihiin saameyn kala duwan, labada ikhtiyaarba waa lab oo si heer sare ah loo habeyn karo oo dabacsan markay tahay qaabeynta.
El timo jaban wuxuu si tartiib tartiib ah ugu kala duwan yahay cabbiraadaha u dhexeeya hoose iyo dusha timaha. Timaha jarista timaha oo hoos loo dhigo lambarka seddexaad waa bilow wanaagsan. Laakiin marka ay timaaddo jibbaarada, ma jiro cabbir caadi ah.
Qaybta sare ayaa hadhay wakhti dheer iyadoo la adeegsanayo maqas. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira noocyo gaagaaban (qaar ka mid ah oo gebi ahaanba lagu sameeyay clippers) kuwaas oo timahaaga siin doona hawo millatari. Ha dheeraato ama ha gaabnaato, fure u ahaanta inay shaqeyso ayaa ah in marwalba la hubiyo in dhererku uu sii kordhayo (ama hoos u dhacayo haddii aan kor ka eegno kor ilaa hoos) si siman oo dabiici ah.
Goyntaani waxay bixisaa saldhig weyn oo loogu talagalay noocyo kala duwan oo timo. Timaha quruxda badan iyo dhalaalaya ayaa ka mid ah xulashooyinka la jecel yahay. Haddii taada aysan ahayn taabashada, tixgeli qayb ka mid ahaanshaha qeexitaanka dheeraadka ah ee qaabka nin ganacsade ah.
Sharad aamin ah da 'kasta, waad la qabsan kartaa timahan timaha labadaba qaab rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn iyadoo la kaashanayo timo habboon. Waxay sidoo kale la shaqeysaa dhammaan qaababka wajiga, maaddaama mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda ay tahay inay suurtagal tahay in la sameeyo kala duwanaansho yar si loo gaaro natiijo dheellitiran. Mid ka mid ah sirta wajiyada dhaadheer ayaa ah in laga bilaabo lambar aad u sareeya dhinacyada, ama si toos ah loogu sameeyo maqas.
Timo jare ka jara
Timaha jarista hoose waa mid aan caadi ahayn sababtoo ah taas wuxuu si lama filaan ah ugu boodayaa inta u dhexeysa hoose iyo sare ee madaxa. Dhinacyada iyo nape gaabka ayaa aad loo gaabiyey, halka dusha sare laga sii dheereynayo. Si ka duwan sida loo yaqaan 'gradient', dusha sare ayaa ka go'ay xagga hoose. Sidan oo kale, ma ahan timo gaaban ama dheer, laakiin waa isku dhafan labadaba.
Dhererka labada qaybood waxay kuxirantahay dookhaaga shaqsiyeed. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato timahan timaha, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in kala duwanaanta cabbiraadda ay tahay mid muuqata.
Marka ay timaado qaabeynta timo jarjar ah, waxaa jira fursado badan. Waxaad fursad u heli doontaa inaad doorato taabasho, jug, kala tagid dhinaca, dhabarka ama qaansada iyadoo kuxiran waxaad u aragto inay ugu habboon tahay munaasabad kasta.
Ka soo kabsaday qarnigii la soo dhaafay oo loo cusbooneysiiyey jiilalka cusub, timaha gaaban ee dhinacyada iyo dhererka sare si fiican ayey kuu shaqeyn doontaa haddii habka labiskaagu yahay qaab magaalo.
Fikrado badan oo timo jaraya oo casri ah
Buzz-ka ama madaxa la xiiray waa goyn kale oo ka dhex socota dadka caanka ah. Way u fududdahay sida gudbinta timaha mashiinka tiro isku mid ah dhammaan madaxaaga. Noocyada gaagaaban waa hab fiican oo lagu qariyo luminta timaha. Haddii aad leedahay timo qaro weyn, waxaad ku dhejin kartaa qashin-yare tiro badan.
Gaar ahaan lagula taliyay xagaaga, timo jare aad u gaaban oo aad ugu baahan shaqo. Tixgeli goos gooska haddii aadan haysan timo kugu filan timo-jarista kale, aad rabto inaad wajigaaga adkeysato, ama kaliya u sahlanaato.: sidaa darteed waxaad diyaar u noqon kartaa waqti ka yar subaxa hore.
Miyaad doorbideysaa inaad iska ilaaliso jarista aadka u adag? Adigu kaligaa ma tihid Ku siiya mashiinka wax lagu gooyo oo timaha uga tag waqti dheer iyo dariiqeeda (had iyo jeer ilaalinta qaab gaar ah) waa wax la moodo.
Haddii aad leedahay timo jilicsan, waxaad isku dayi kartaa timo goobeed. Donald Glover ama Jay-Z ayaa ka mid ah danjirayaasha ugu wanaagsan qaabkan.
Iyada oo laga jawaabayo taabashada caanka ah ee yaraaday, Maalmahan waxaad sidoo kale arki kartaa jeexan badan oo leh jajabyo iyo timo dhexdhexaad ah. Xul wanaagsan timo ruxruxa oo jilicsan oo timahaaga siinaya taabasho dabacsan.
Timothée Chalamet iyo Milo Ventimiglia timahoodu waa meel aad u fiican oo laga raadsado dhiirigelinta timaha dheer..
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timaha » Timo jarista casriga ah
Jimicsiyada caagga ah